OPERA SI SAVEFROM.NET MGBATI - OPERA - 2019
Savefrom.net maka Opera: ngwá ọrụ dị ike maka nbudata ọdịnaya ọdịnaya
O di nwute, o nweghi ihe nchoputa nwere ihe ndi ozo maka ibudata vidio vidio. N'agbanyeghị ọrụ dị ike ya, ọbụna Opera enweghị ụdị ohere ahụ. N'ụzọ dị mma, enwere mgbatị dị iche iche na-enye gị ohere ibudata vidio vidio na Intanet. Otu n'ime ihe kachasị mma bụ nchọgharị ntanye Opera Savefrom.net enyemaka.
Ntinye aka inyeaka Savefrom.net bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma maka nbudata vidio vidiyo na ọdịnaya ndị ọzọ nke multimedia. Mgbatị a bụ ngwaahịa software nke otu saịtị ahụ. Ọ nwere ike ibudata vidiyo site na ọrụ ndị a ma ama dị ka YouTube, Dailymotion, Vimeo, Odnoklassniki, VKontakte, Facebook na ọtụtụ ndị ọzọ, yana site na saịtị ndị ọzọ a maara nke ọma.
Iji tinye ntinye aka inye aka na Savefrom.net, gaa na ebe nrụọrụ weebụ Opera na mpaghara ngalaba add-ons. Enwere ike ime nke a site na isi ihe nchọgharị ahụ, site na ịpị otu ugboro na "Extensions" na "Download Extensions".
N'ịga na saịtị ahụ, tinye ajụjụ "Savefrom" na igbe ọchụchọ, ma pịa bọtịnụ ọchụchọ.
Dịka ị nwere ike ịhụ, na nsonaazụ ahụ, enwere naanị otu ibe. Gaa ya.
Na ntinye mgbasa ozi nwere nkọwa zuru ezu banyere ya na Russian. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwere ike ịgụ ha. Mgbe ahụ, ịga n'ihu na ntinye nke tinye, pịa bọtịnụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ "Tinye ka Opera".
Usoro nhazi amalite. N'oge usoro a, mkpụrụ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ anyị na-ekwu banyere elu na-acha odo odo.
Mgbe e mechara nwụnye, a na-ebufe anyị na saịtị ntanetị ọrụ, na akara ngosi ya na-egosi na ngwaọrụ ihe nchọgharị.
Iji malite ijikwa ndọtị, pịa akara ngosi Savefrom.net.
N'ebe a, anyị nwere ohere ịga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke usoro ihe omume ahụ, kọọ akụkọ njehie n'oge nbudata, budata faịlụ ọdịyo, listi ma ọ bụ foto, ọ bụrụhaala na ha dị na ebe a na-aga eleta.
Iji gbanyụọ ihe omume ahụ na saịtị ụfọdụ, ịkwesịrị pịa bọtịnụ ọkụ na ala nke windo ahụ. N'otu oge ahụ, mgbe ị na-agbanwe ihe ndị ọzọ, mgbatị ahụ ga-arụ ọrụ na ọnọdụ ọrụ.
Na-enye Savefrom.net maka otu saịtị kpọmkwem n'otu ụzọ ahụ.
Ka ị nwee ike ịkọwawanye ọrụ nke mgbatị ahụ maka onwe gị, pịa "Ntọala" ihe dị na windo ahụ.
Tupu anyị bụ ntọala maka ndọtị Savefrom.net. Site n'enyemaka ha, ị nwere ike ịkọwapụta nke ọrụ ndị a ga-arụ ọrụ na.
Ọ bụrụ na ịchichapụ igbe dị n'akụkụ ọrụ ụfọdụ, Savefrom.net agaghị edozi ọdịnaya ọdịnaya nke ya maka gị.
Nbudata ihe ntanetị
Ka anyị hụ otú ị nwere ike ibudata vidiyo site na iji ihe atụ nke vidio vidio YouTube na-eji ndọtị Savefrom.net. Gaa na saịtị ọ bụla nke ọrụ a. Dị ka ị pụrụ ịhụ, akara ngosi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ pụtara n'okpuru ihe ọkpọ vidiyo. Ọ bụ ngwaahịa nke mgbakwunye arụnyere. Pịa bọtịnụ a iji malite ibudata vidiyo ahụ.
Mgbe ịpịrị bọtịnụ a, nbudata nke vidiyo a gbanwere na faịlụ na-amalite site na ọkọlọtọ Opera browser loader.
Nbudata algorithm na ihe ndi ozo ndi na akwado oru a na Savefrom.net banyere otu. Naanị ọdịdị nke bọtịnụ gbanwere. Dịka ọmụmaatụ, na netwọk mmekọrịta netwọk VKontakte, ọ dị ka nke a, dịka e gosiri na mbiet dị n'okpuru ebe a.
Na Odnoklassniki, bọtịnụ dị ka nke a:
Atụmatụ ya nwere bọtịnụ maka ibudata multimedia na ihe ndị ọzọ.
Ịkwụsị ma wepụ ihe ndọtị
Anyị chepụtara otú ị ga-esi gbanyụọ ndọtị Savefrom maka Opera na saịtị dị iche, ma otu esi agbanye ya na ihe niile, ma ọ bụ wepu ya na ihe nchọgharị ahụ kpamkpam?
Iji mee nke a, gaa na isi nhọrọ nke Opera, dị ka e gosiri na foto dị n'okpuru ebe a, na Njikwa Mgbatị ahụ.
Lee, anyị na-achọ maka ngọngọ na ndọtị Savefrom.net. Iji gbanyụọ ndọtị ahụ na saịtị niile, pịa bọtịnụ "Gbanyụọ" n'okpuru aha ya na Njikwa Mgbatị ahụ. N'otu oge ahụ, akara ngosi ndọtị ga-apụkwa site na toolbar.
Iji wepụ Savefrom.net kpamkpam site na ihe nchọgharị gị, ịkwesịrị ịpị obe ahụ dị n'akụkụ aka nri nke ogidi ahụ na ntinye a.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ndọtị Savefrom.net bụ ngwá ọrụ dị mfe ma dị mfe maka nbudata vidio vidiyo na ọdịnaya ndị ọzọ dị na multimedia. Isi ihe dị iche site na mgbakwunye na mmemme ndị ọzọ dị na ya bụ nnukwu ndepụta nke ihe ntanetị enyere.